TAMAANDHAYNTA "GACAN YAR": SHARAXAAD IYO DABEECADAHA KALA DUWAN - NOOCYO YAANYO
Tamaandhada kala duwan ee "Raspberry Giant" waxay caan ku tahay dhadhanka iyo cabbirka. Waxa uu ku guulaystay inuu bannaanka u la mid ah midabkiisa oo xiiso leh, dhadhan iyo dhalid.
In this article waxaan ku sharaxi doonaa sida loo koro yaanyo "Raspberry Giant", sharaxaad ka duwan noocyada iyo sifooyinka daryeelka.
"Muuqaalka Raspberry": sharaxaad iyo astaamo kala duwan
Yaanyo "Raspberry Giant" - kala duwanaansho kala duwan, beerashada taas oo aan u baahnayn xakamaynta koritaanka, sidaa daraadeed, ma noqon doonto lagama maarmaan in la isku xoqo qodobada koritaanka. Si ka duwan noocyada shtambovyh ee yaanyada, baadiyaha at "weyn weyn Crimson" ee size weyn. Qalabku waa mid xoog leh, xoog leh, caleemo leh, wuxuuna noqon karaa 50 illaa 100 cm oo dherer ah, wuxuu koraa 70 cm celcelis ahaan.
Tamaandho waa la kori karaa labadaba beerta furan iyo aqalka dhirta lagu koriyo. Goobta furan, noocyada soo socda ee yaanyada waa qumman yihiin: Batyana, Honey drop, Maryina Roshcha, Gawaarida, Novich.
Nidaamka asaasiga ah si fiican ayaa loo horumariyaa, iyadoo koritaanka uusan qoto dheereynin. Caleemaha waa weyn, qaabka la mid ah sida in yaanyada intooda badan, cagaar madow. Qaab dhismeedka, waxay yihiin xargaha, iyada oo aan pubescence.
Ma taqaanaa? Tamaandhada laftooda waa casaan, inta badan midabkoodu wuxuu u eg yahay raspberries, taas oo noocyo kala duwan ay soo qaadeen magaceeda.
The "Raspberry Giant" wuxuu leeyahay nooc fudud oo dhexdhexaad ah ee inflorescence, ugu horeysay waxaa lagu sameeyay kor ku xusan 5-6 caleen, iyo ka dib in ay horay u tagaan leh dhexda ah laba caleemo. Flowers caadi ahaan 7-8 gooya, ha jeexin. Qalabka tamaandhada ah wuxuu leeyahay iskudhaf, miisaan badan oo miro leh ayaa aad u fiican.
Tomato Geedka Gacanta - noocyo hore u bislaaday. Marka ay qaan gaadhaan, ma ayan jabin. Toob miro yaryar waa mid aad u yar. Goosashada ugu horeysay waxaa horay loo soo ururin karaa 90 maalmood laga bilaabo marka caleemaha ugu muhiimsan soo muuqday. Iyadoo hal mitir oo laba jibbaaran ah ayaad ka soo qaadan kartaa 18 kg oo miro ah, hal baadiyaha ayaa keena celcelis ahaan 6 kg. Caqli-galnimada qaadashada cudurrada caamka ah waa dhexdhexaad, tusaale ahaan, yaanyo caato ah oo waqti dambe ah ma laha waqti ay ku xanuunsadaan, sababtoo ah dalagga ayaa soo go'ay ka hor intaan heerkulku hoos u dhicin.
Markaad dooranayso abuur, waxaad u baahan tahay inaad bilowdo inaad ka bilowdo arrimo dhowr ah. Had iyo jeer cadee shuruudaha kala duwan ee aad jeceshahay inay koraan, sababtoo ah kuleylayaashu si liidata ayey u koraan haddii lagu beeray dhul furan. Sidoo kale tixgelin gobolkaaga sii kordhaya, cimilada qabow ee degaankaaga, dooro noocyo jiilaal-adag. Marka aad soo iibsanayso wax shinni ah, oo ay ku jiraan yaanyo "Raspberry Giant", hubi inaad ogaatid sifaha noocyada kala duwan si aad u hesho nooca aad u baahan tahay, sababtoo ah nooc kasta wuxuu leeyahay dhadhankiisa, miisaanka, cabbirka iyo ujeedada.
Sida loo abuuro "Raspberry Giant"
Si aad u korto noocyada kala duwan "Crimson Giant", waxay u baahan doontaa inaad bixiso daryeel badan iyo fiiro haddii aad rabto inaad si wanaagsan u hesho dhirta. Ka hor inta beerto, waa lagama maarmaan in la diyaariyo abuurka, ciidda iyo abuurka yaanyo sax ah.
Laga soo bilaabo diyaarinta habboon ee abuurka yaanyo waxay ku xirnaan doontaa wax badan oo ku saabsan beerashada. First of dhan, waxaad u baahan tahay inaad doorato caafimaad leh, oo aan waxyeello abuurka. Ka dib markii, hubi in ay jeermi iyaga oo ah xal daciif ah ee kaneecada muddo 2 saacadood ah. Kadib waqtiga kama dambaysta ah, biyo raaci biyo diirran. Ku qooji abuurka xalka koritaanka ka hor inta aan la beeri.
Wixii koritaanka wanaagsan, ciidda waa in ay ahaato mid bacrin ah, oo lagu kobciyo hawada iyo hooseeyo ee aysidhka. Sandy ama loamy carrada ayaa ugu habboon yaanyada sii kordhaya.
Sida loo abuuro miraha "Crimson Giant"
Tamaandhiga "Raspberry Giant" ma kala duwanaan noocyo kale oo ka mid ah tiknoolojiga beeraha, sidaas darteed, miraha waxaa lagu beeray March. Taas waxaad u baahan tahay inaad diyaariso sanduuq alwaax ah oo leh substrate. Earth iyo humus isku daraan qeybo siman. Humus wuxuu ku haboon yahay inuu si fiican u jilicsan yahay oo dabacsan yahay. 30 g oo ah superphosphate iyo galaas oo ash ayaa sidoo kale lagu daraa bacriminta. Ka dib markii aad abuurtay abuurka sanduuq, iyaga ku rusheeyso dusha lakabka 8 mm ee dhulka. Ka dib markii, ku shub iyaga iyada oo shaandho ah leh xal daciif ah ee kaneecada. Sanduuqa sanduuqa ayaa si fiican loo dhigayaa windowsill on dhinaca qorraxda. 2-dii maalmoodba mar waa lagama maarmaan in la hubiyo ciidda qoyaanka. Haddii dhulka uu qalalan yahay, ku shub biyo diirran oo ka badan abuurka. Ka dib 7 maalmood waxaad horay u arki kartaa caleemaha kowaad.
Koraaya yaanyo: sida loo daryeelo geedo
Geedo lagu taliyey in ay quudiyaan 14-kii maalmoodba mar. Si tan loo sameeyo, isku dar 20 g oo ah superphosphate 10 litir oo biyo ah. Sida caleemaha u koraan, waxay u baahan yihiin in lagu dhex miiro weel gaar ah. In cimilada diiran, waxaa lagula talinayaa in la dhigo geedo on waddada, sidaa darteed dhirta dhallinyarada si tartiib tartiib ah loo habeeyey.
Waa muhiim! Xaaladdan oo kale, kiis kasta, ha dhigin geedo qorraxdu si toos ah, haddii kale geedo si fudud u gubi karaa.
Goorta iyo sida loo abuuro geedo dhulka
Geedo la beeray waxay noqon kartaa horraantii Juun. Waqtiga habeenkii waa u fiican yahay ganacsigan, sidaas darteed waxaa jira fursad weyn oo dhirta la aqbali doono. Ceelka waxaa lagu qoday on bayaanka ee majarafad. Masaafada u dhaxaysa godadka waa inay ahaataa ugu yaraan 90 cm. Sida dharka ugu sareeya, humus waxaa lagu dari karaa ceelka diyaarsan.
Noocyada ugu fiican ee yaanyada waxay noqon doontaa: zucchini, qajaarka, karootada, kaabajka, dill, dhir.
Waa muhiim! Si aad u ilaaliso "Dhaxul Raspberry" ah oo ka soo dhaxeysa dhaxan, si taxadar leh u barto sharaxaadda noocyada kala duwan iyo diyaarinta duubka balaastiga ah iyo baqtigaba. Haddii loo baahdo, daboolo geedo si loo ilaaliyo dhirta laga bilaabo khalkhalka.
Daryeelka "Raspberry Giant" waa mid sahlan, laakiin waa in loo sameeyaa si habboon. Qoryaha saxda ah, dhar xidhashada, yaanyada yareeynayaa dhammaantood waxaad u baahan tahay inaad ogaatid daryeelka xanaanada.
Inkasta oo tamaandhada "Raspberry Giant" kala duwan ay koraan kaliya hal mitir oo dherer ah, waa lagama maarmaan in la sameeyo garter. Waxaa ugu wanaagsan in la rakibo tiirarka sida ugu dhakhsaha badan geedo waxaa la beeray, haddii kale nidaamka xididka geedka waxaa laga yaabaa in waxyeelo. Sida ugu dhakhsaha badan ee asliga ah ee tamaandhadu bilaabaan inay soodhow dhinaca, waa in lagu xiro.
Xeerarka quudinta iyo waraabinta
Quudinta koowaad waa in la sameeyaa toddobaad ka dib marka la beero geedo. Caleemaha sannadkii hore ayaa aad ugu habboon tan. Powder dhulka ku hareereysan tamaandhada iyaga oo leh, iyo dhamaadka July waxay qudhmi doonaa, iyo yaanyada waxay heli doonaan nafaqooyinka lagama maarmaanka ah. Quudinta waxaa lagu samayn karaa xal of digada. Waraabinta u baahan tahay yaanyada sida loo baahan yahay marka dhulku qalalan yahay. Waraabinta waa in ay ahaato mid fara badan.
Tamaandhiga "Raspberry Giant": mudnaanta iyo ciqaabta noocyada kala duwan
Tamaandhiga "Muuqaalka Raspberry" wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan: miro waaweyn iyo dhadhan fiican leh, dhalidda sare, dareenka hore, bandhigga. Dhammaan kuwa beerta noocan ah ee tamaandhada ah, waxay yiraahdeen inuusan lahayn wax khasaare ah. Inta lagu jiro daweynta qabowga ama kuleylka, hantida faa'iidada leh looma lumo. Waxa kaliya ee la xusi karaa maaha mid ku salaysan nooca tamaandhada ah, - "Muuqaal rasuul ah" ma aha doorka ugu fiican ee ilaalintaTan iyo mawduuca ugu muhiimsan ee kala duwanaanta ayaa ah xajmiga weyn ee miraha.
Hadda waxaad taqaanaa wax walba oo ku saabsan yaanyo yaryar ah "yaryar dabiici ah" aadna si ammaan ah isku dayi kartid inaad ku korodho goobahaaga. Sida aad ka arki karto maqaalkan, xirfad gaar ah ayaa loo baahan yahay tan. Laakiin tamaandhiga "Raspberry Giant" wuxuu leeyahay dib u eegis wanaagsan oo u dhexeeya beeralaha, iyo dhadhanka midhihiisa si aad u farxi doonaa.